भौगोलिक जिब्रो। कारण, लक्षण, उपचार
तपाईं आफैलाई पाउन भने , रातो स्थलहरू भाषामा एउटा जटिल ढाँचा, संसार नक्सामा महादेशमा को reminiscent गठन, यी desquamative glossitis, "भौगोलिक जिब्रो" भनिएको छ जो को संकेत हो सम्भव छ। रोग को कारण अस्पष्ट छ, तर यो केही सामान्य पुरानो रोग को उपस्थिति मा विकास हुन्छ भनी उल्लेख गरेको छ।
अक्सर एक exacerbation मा निदान Glossitis जठरांत्रिय रोगहरु, कलेजो, छाला, र पनि तीव्र संक्रमण, कोलेजन (संयोजी ऊतक घाउ), helminthic infestations मा।
एक एकदम साधारण अवस्था - भौगोलिक जिब्रो, जो को कारण भडकाऊ वा degenerative घटना कारण हुन सक्छ। यसबाहेक, यो कुनै पनि उमेर मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो delamination glossitis mucosal epithelium जिब्रो papillae र dystrophic परिवर्तन, जसद्वारा यी अंश गठन गर्दै सेतो रिम घेरिएको उज्ज्वल रातो स्थान रूपमा हुन्छ भने ऊतक exfoliated। नियम, यो desquamation विभिन्न चरणमा मा विभिन्न आकार र घाउ को आकार को एक नम्बर गठन।
भौगोलिक जिब्रो को उपस्थिति फरक हुन अपेक्षा गर्न सकिन्छ गराउँछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, desquamative glossitis को दिल मा विज्ञान अज्ञात कारण हुन्छ कि Tissues को कुपोषण छ। यो रोग लामो समयसम्म उदाहरण एन्टिबायोटिक लागि, medicaments प्रयोग को परिणाम हुन सक्छ भनेर विश्वास छ। धेरै महिलाहरु भौगोलिक जिब्रो रूपमा यो अवस्था परिचित छन्। यो गर्भावस्था र मासिक धर्म - यसको केही महिलाहरु गराउँछ। यस मामला मा, तुरुन्तै जन्म वा मासिक सामान्य mucosa को समापन पछि। त्यहाँ बच्चा को एक भौगोलिक जिब्रो हो भने, कारण रूपमा हुन सक्छ निम्नानुसार: प्राथमिक दाँत, कृमि infestation, को फुट्ने काम Exudative diathesis।
सामान्य र तेज: चिकित्सा desquamative glossitis दुई प्रकार हो। पहिलो मानिस कुनै पनि असुविधा पैदा बिना painlessly हुन्छ। केही विशेषज्ञहरु जसमा विशेष उपचार आवश्यक छैन आदर्श, को सामान्य रूप भेद विश्वास गर्छन।
यो तीव्र फारम, भोजन समयमा विशेष गरी महसुस गरिएको छ जो भाषा को क्षेत्र मा झुनझुनी जल, दुखाइ द्वारा विशेषता छ। तातो, मसालेदार, अम्लीय खाद्य पदार्थ मात्र यो भावना reinforces। त्यहाँ स्वाद disturbances छन्। त्यहाँ किनभने उनीहरू भौगोलिक जिब्रो जस्ता रोग मा एक स्वस्थ श्लेम लाग्एको झिल्ली द्वारा सुरक्षित छैनन् घाउ बगाउने संक्रमण एक जोखिम छ।
कसरी उपचार गर्न desquamative glossitis? कुनै उजुरी छन् भने, नियम रूपमा, कुनै पनि उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् छैन। सहायता दुखाइ अनुभूति र सुक्खा भाषाको लागि आवश्यक छ। कुनै पनि परेशान खाद्य पदार्थ जोगिन पहिलो कुरा: मसालेदार, भद्दा, नूनिलो, तातो। यो एक कुल्ला, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र epithelizing एजेन्ट (भिटामिन ए, ई तेल) को रूपमा स्थानीय एनेस्थेसिया देखाइएको छ। बीचमा glossitis सम्भावित कारणहरू जठरांत्रिय रोगहरु, कृमि infestations र अरूलाई प्रकट आफ्नो दबाइ लिनुपर्छ भने।
Hepatitis सी: गर्मी चालू अवधि र उपचार
को गोडा संयुक्त को Hemarthrosis। उपचार
म्यकोप्लास्मा संक्रमण: लक्षण र उपचार
महत्त्वपूर्ण लक्षण। Hydatid रोग यो निदान गर्न व्यवहार, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण सम्भव छ, profilaktirovat
जीवनको पूर्णतामा: बार्सिलोना समुद्र भ्रमण
शुरुवात कलाकार chanterelles सुझाव कसरी आकर्षित गर्न
एक टोपी बुना भयो कपडा कसरी सी गर्न: ढाँचा, वर्णन
कसरी आकार 3x6 polycarbonate सही मा एक ग्रीनहाउस सुसज्जित गर्न? (फोटो)
Nuri Sahin: टर्की-जर्मन फुटबल खेलाडी को उपलब्धिहरू र सफलताको मा
"Emolium" लागूपदार्थको। प्रयोगको लागि निर्देशन
सास वाल्व CDS-3000 प्रकार र CDS-1500
सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु - यो रोल को लागि मीठो!
आफ्नो खुट्टा मा शंकु को उपचार। उपलब्ध विधिहरू
एक राउटर के हो र यसको लागि के हो?